Baarlamaaka Soomaaliya oo la sheegay inuu bur-bur ku dhawyahay! – Hornafrik Media Network
Baarlamaaka Soomaaliya oo la sheegay inuu bur-bur ku dhawyahay!
By HornAfrik	 On Aug 13, 2018
Hornafrik-Magaalada Nairobi ee dalka Kenya ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa Honrafrik uga soo waramaya in Gudoomiyihi hore ee Golaha shacabka Soomaaliya Prof Maxamed sjhiikh Cusmaan Jawaari uu xubno kamid ajh uqeybsanayaasha beesha caalamka ee Arimaha Soomaaliya u gudbiyay warqad uu ku sheegayo in shaqada Baarlamaanka Soomaaliya ay hoos u dhacday islamarkaana uu baarlamaanka Bur bur ku dhawyahay.
Qaar kamid ah xildhibaanada Baarlamaanka oo isugu jira Golaha shacabka iyo Aqalka sare ayaa ku sugan magaalada Nairobi , waxaana lagu soo waramayaa in Gudoomiye Prof jawaari uu qaarkood la yeeshay shirar gooni gooni ah oo uu kala hadlayo in beesha caalamka ay u sheegaan in gaabsi weyn uu ku yimid shaqada Baaraalamaanka.
Xildhibaano qaar aya si hoose inoogu sheegay in kulamada uu Pfo Jawaari la qaatay xubnaha beesha caalamka uu ugu shegay in wixii ka danbeeyay markii isaga laga keenay mooshinka uu meesha kaga baxay ay shaqada Baarlamaanka noqotay mid aan socon.
Kalfadhigii sadexaad ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu tilmaamaa inuu ahaa kii ugu kulamada iyo waxqabadka yaraa , waxaana waqtiga ugu badan ee kalfadhigaasi uu kaga baxay khilaaf hareeyasy xildhibanada ku kala qeybsamay mooshin laga keenayi gudoomiyihii xiligaasi Maxamed Shiikh Cusmaan.
Gudoomiyiho hore ee Golaha shacabka ayaa la tyilmaamay in magalaad Nairobi uu uga sii baxay dalak Konfur Afriak oo uu sidoo kale shirar muhiim ah kulahaa.
Baaralamanka Soomaaliya ayaa ku jira mudada fasaxa waaxana horaanta bisha soo siocda ee September lagu wadaa inuu furmo kalfadhiga afaradaad ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Deg-DegWafdi ka socda dowladda Eritrea oo Muqdisho soo gaaray.
Wafdiga Eritre ee Muqdisho yimid oo la kulmay Madaxweyne Farmaajo.